Tomato Ọfụfụ f1 ụdị nkọwa na njirimara - Akwukwo nri - 2020
Ọ dị mfe na-eto eto, enwere ụtọ - tomato. Ọfụfụ F1: àgwà na nkọwa nke ụdị dị iche iche
Mkpụrụ tomato - nnukwu nhọrọ maka ndị nwe ubi ugbo. N'ime ụdị dịgasị iche iche nke ndị na-azụ atụrụ, ọ bara uru na-agbalị ịnwụ anwụ F1 - ịmị mkpụrụ, dị mfe dị ọcha, ezigbo maka oghe ala.
Mkpụrụ akwụkwọ ndị a nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke egosipụta àgwà ọma na àgwà. Ị ga-amụtakwu banyere nke a na isiokwu anyị. Na-agụ nkọwa zuru ezu nke ụdị dịgasị iche iche, mara nke ọma na atụmatụ ya.
Ọrịa na pests: otu esi emeso ha
Tomato Okpomọkụ f1: nkọwa nke iche iche
Aha akara F1 ọwụwa anyanwụ
Nkọwa zuru ezu Oge etiti oge ịchọpụta ngwakọ nke ọgbọ mbu
Onye malitere Russia
Na-agba 90-110 ụbọchị
Ụdị Ovoid dị elu, na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ike nghọta na ncha
Nkezi usoro uka tomato 50-100 grams
Kwe iche 3-4 n'arọ site na ohia
Atụmatụ nke na-eto eto Ụkpụrụ Agrotechnika
Ọrịa ọrịa Na-eguzogide ọrịa ndị bụ isi
Tomato Ọfụfụ F1 bụ nnukwu ndị na-enye mkpụrụ akụkụ nke mbụ. Ogologo oge uto. Achọpụta osisi, kọmpat, na nhazi dị elu nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị iche iche, dị mfe, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Mkpụrụ osisi bụ ndị na-ajụ ihe, obovate, na ihe a na-ahụtụbeghị anya na nsị. Mkpụrụ tomato na-agbapụta site na 50 ruo 100 g. Anụ ahụ na-adịkarị nwayọọ, na-atọ ụtọ, ya na obere mkpụrụ osisi, anụ ahụ dị oke, ma ọ bụghị ihe siri ike.
Nri na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ nke na-enweghi obi ụtọ. Na usoro nke na-eto eto, tomato gbanwere agba si na-acha akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie. Ụdị tomato dị iche iche na FF - mkpụrụ nke ọrụ nke ndị na-azụlite Russia. Ọ bụ nchịkọta nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke Russia, ọkachamara na ndị ọhụrụ na-adọrọ adọrọ.
Klas bụ nke zuru ụwa ọnụ, ọ dị mma maka ịkọ ihe na mbara ala, n'okpuru ihe nkiri ma ọ bụ na ọkpụkpụ na mbara ihu. A na-echekwa mkpụrụ osisi ndị a kụrụ n'ubi, ha nwere ike ịchapụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma jiri aka ha chara n'onwe ha. Tomato dị ezigbo mma maka ịme ihe niile. Nkịtị siri ike na-echebe ha pụọ ​​na cracking, tomato na-ele anya nke ọma na anoghi n'ulo oba. A na-eji mkpụrụ osisi a mịrị amị mee ihe ndị dị na tomato: ebe dị iche iche, poteto ndị a kpụkọrọ akpụkọ, ihe ọṅụṅụ, ihe oriri.
Tụlee ịdị arọ nke mkpụrụ osisi na ndị ọzọ nwere ike ịnọ na tebụl:
Aha akara Mkpụrụ osisi
F1 ọwụwa anyanwụ 50-100 grams
Nastya 150-200 grams
Ɛpo 80-90 grams
Pearl Pearl 15-20 grams
Domes nke Siberia 200-250 grams
Ntu oyi 50-200 grams
Ọhụụ F1 150 grams
Otu n'ime uru ndị dị mkpa dị iche iche:
mmalite ripening oge;
ohere nke owuwe ihe ubi;
akwa uto mkpụrụ osisi;
Ihe na-adịghị ike gụnyere gụnyere enweghị ike ịnakọta mkpụrụ n'onwe ya. Dị ka mkpụrụ osisi ndị ọzọ, osisi ndị sitere na osisi anaghị eketa ihe ịrịba ama nke osisi nne. A pụghị ịkpọkwa ihe ndekọ. I nwekwara ike iji ya tụnyere ihe ndị ọzọ dị na tebụl n'okpuru:
Aha akara Nabata
F1 ọwụwa anyanwụ 3-4 n'arọ site na ohia
Bobcat 4-6 n'arọ site na ohia
Akụ na snow 2,5 kg site na ohia
Ụdị Russian 7-8 n'arọ kwa square mita
Apple Russia 3-5 n'arọ site na ohia
Eze ndị eze 5 n'arọ site na ohia
Katya 15 n'arọ kwa square mita
Ogologo oge 4-6 n'arọ site na ohia
Utu jingle 18 n'arọ kwa square mita
Onyinye Nna Ukwu 6 n'arọ kwa square mita
Crystal 9.5-12 n'arọ kwa square mita
Lee n'okpuru: Tomato Sunrise photo
Tomato ngwakọ dị mfe iji na-eto eto. Mkpụrụ anaghị achọ disinfection, usoro niile dị mkpa ha na-ebu tupu ha ere. Iji mee ka germination nke mkpụrụ nwere ike mesoo na ibu stimulator. Ala maka seedlings bụ nke ngwakọta nke ubi ma ọ bụ sod ala na humus. Maka nnukwu ihe oriri bara uru i nwere ike itinye osisi ash.
Mkpụrụ na-akụ ya na ntakịrị mmelite, powdered na mkpa oyi akwa ala na sprayed na mmiri. Maka ịga nke ọma germination chọrọ okpomọkụ nke 23 ruo 25 degrees. Mgbe germination, a na-etinye ihe ndị ahụ na window sill nke windo dị na mbara igwe ma ọ bụ n'okpuru oriọna. Dive ya mgbe ọdịdị nke ụzọ mbụ ndị a dị. N'oge a, enwere ike ịkụzi tomato na-eto eto na fatịlaịza zuru ezu. Na ala na-emeghe, a na-atụgharị osisi ndị ahụ na ọkara nke abụọ nke May, mgbe ala dị mma. Na 1 square. m tinye 3-4 ohia. Tupu akuku, a na-emeghe ala ma jiri akwa humus mee ihe.
Ikwesiri igbanye osisi a ka mmiri na-achanwụ, tomato anaghị achọ mmiri mmiri. Mmiri na mmiri oyi anaghị amasị ha, ọ nwere ike ịkpata ihe ijuanya. Maka oge, bushes 3-4 ugboro nri na ịnweta ma ọ bụ organic fatịlaịza. Ekwesighi ime ka ihe ndi ozo choo. Ka mkpụrụ ahụ na-eto, a pụrụ ijikọ alaka dị arọ iji kwado iji zere imebi.
Na-agụkwa ihe ndị na-adọrọ mmasị banyere ịkụ mkpụrụ tomato n'ime ogige: otu esi ehicha ya na mulching?
Kedu esi esi rụọ ụlọ obere griin ha maka seedlings ma jiri ndị na-akwalite mmepe?
Tomato dịgasị iche iche Ọwa F1 na-eguzogide ọgwụ na ọrịa ndị dị egwu nke nightshade. Ọ na-achịkwa iji chaa chaa chaa tupu ntiwapụ nke mbubreyo, ọnyá nje nke ndị ngwakọ adịghịkwa egwu.
Otú ọ dị, na akwa, osisi nwere ike imetụta osisi, mgbọrọgwụ ma ọ bụ isi awọ. Iji gbochie ihe omume ya ga enyere aka mgbe ọ na-atọghe ma ọ bụ mulching nke ala.
Mgbochi ọgwụ na-egbochi mkpụrụ osisi na phytosporin ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ na-adịghị egbu egbu ga-azọpụta ero.
N'ebe ohia, aphids, thrips, udiri ududo. Ka oge na-aga, e nwere ndị na-adịghị ahụkebe, Medvedka, Colorado. Enwere ike iwepu pests site n'enyemaka nke ụmụ ahụhụ ma ọ bụ ngwaahịa ụlọ: decoction nke celandine, ammonia mmiri mmiri, mmiri ncha.
Ọpụpụ F1 - ụdị dị iche iche nke nakọtara ọtụtụ nyocha dị mma sitere na ndị na-elekọta ubi. Ndị ngwakọ ahụ na-eguzogide ọrịa, ọ bụghị nke dị egwu, na-egbochi ihu igwe na-agbanwe agbanwe. A ghaghị itinye ụdị dịgasị iche iche na nchịkọta ọ bụla nke tomato, ha ga-aba uru maka ndị na-eto eto na ahụmahụ na ahụmahụ.
Early maturing Etiti oge Ọkara n'oge
Pearl Pearl Goldfish Ọchịchị Ama
Ajọ ifufe Ntu ọka Sultan
Red Red Ọrụ ebube nke ahịa Nro nro
Volgograd Pink De barao nwa New Transnistria
Elena Osisi De Barao Nnukwu Red
Ka Rose De Barao Red Mkpụrụ obi Russia
Onyinye dị elu Ezigbo ekele Pullet